काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण भित्रभित्रै फैलिइरहेको छ ! – Khabar Silo
४ जेठ, काठमाडौं । घटना १ : बिहीबार धुलिखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी २९ वर्षीया महिलाको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंंख्या मन्त्रालयले शनिबार साँझ घोषणा गर्‍यो । उनी ९ दिनकी सुत्केरी थिइन् । कोभिड–१९ का कारण नेपालमा भएको यो पहिलो मृत्यु समेत हो ।
शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितबाट ती सुत्केरी महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण हुने सम्भावना नभएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दास बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समिरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको आरडीटी पोजेटिभ आउनु भनेको उनीहरू कुनै समय संक्रमित थिए भन्ने हो ।’
माथिका दुवै घटनाले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ भन्ने देखाएको डा. दीक्षितको तर्कमा अरू जनस्वास्थ्य विज्ञहरू पनि सहमत छन् ।
‘कहिलेकाहीँ फल्स पोजेटिभ आउन सक्छ । किनकी आरडीटीमा शतप्रतिशत सही रिजल्ट आउँछ भन्ने हुन्न । तर, साढे ६ सय टेस्ट गर्दा ३१ पोजेटिभ आउनु भनेको फल्स पोजेटिभ हुन सक्दैन’ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. विश्वनाथ कोइरालाले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘लकडाउन भनेपछि मानिसहरूको आवतजावत रोकिएको छैन । कोरोना संक्रमण फैलिएको ठाउँबाट पनि मानिसहरू आएका छन् । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण फैलिएको छ ।’
जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्काका अनुसार कोभिड–१९ को भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको पहिलो सातादेखि आईजीएम एन्टिबडी बन्न थाल्छ । शरीरमा भाइरस पसेको ९/१० दिन भएको छ र त्यसै अवधिमा आरडीटी परीक्षण गरियो भने संक्रमण हुँदाहुँदै पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ । किनकी, यो किटले भाइरस प्रवेश गरेको नौ दिनपछि मात्र रिपोर्ट पोजेटिभ देखाउँछ ।
यस्तै, आईजीजी एन्टिबडी शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको करिब १५/२० दिनपछि मात्र बन्छ । त्यसअघि व्यक्ति संक्रमित भए पनि आरडीटी किटले नेगेटिभ नै रिपोर्ट निकाल्छ । त्यसैले र्‍यापिड टेस्ट विधिबाट दुईमध्ये एक वा दुवै प्रकारका एन्टिबडी भए–नभएको पहिचान गरेर कोभिड–१९ संक्रमित भए–नभएको पहिचान गर्ने पीसीआर गर्नुपर्ने जीवाणु वैज्ञानिक डाक्टर खड्का बताउँछन् ।
तर, काठमाडौं उपत्यकामा भेटिएका संक्रमितहरूसँगै दुवै घटनाले काठमाडौंमा कोरोना छैन भन्ने दाबीलाई खण्डन गरेको छ । ‘अब काठमाडौंमा कोरोना छैन भन्ने उपयुक्त आधार देखिन्न’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘आरडीटी पोजेटिभ देखिएकाबाट पनि अरूलाई सर्ने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गर्नुपर्छ ।’
उनीहरूबाट संक्रमण सर्ने डर हुँदाहुँदै किन यसो गरियो त ? ‘आरडीटी पोजेटिभ आउने सबैको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न सम्भव छैन’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर पाण्डे भन्छन्, ‘आरडीटी पोजेटिभपछि पीसीआर जाँच गर्दा पनि पोजेटिभ आयो भने मात्र कन्ट्याक ट्रेसिङ गरिन्छ ।’
आईजीएम एन्टिबडी देखिएकाहरूको पीसीआर किन नेगेटिभ देखियो भन्ने विषय अध्ययनको विषय रहेको उनको कथन छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै आरडीटी पोजेटिभ आउँदा (आईजीएम) केही केस पीसीआरमा पनि पोजेटिभ आउनुपर्ने हो । किन सबै नेगेटिभ आयो भनेर किटको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
काठमाडौं । उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि उपत्यकाका विद्यालय आंशिकरूपमा खुल्न थालेका छन् । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी खुल्न थालेका हुन् । विद्यालय खोल्ने विषयमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । दुई महानगरपालिका क्षेत्रमा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय धमाधम […]
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ‘लाइसेन्स’ परीक्षा पुन: शुरू
२० भदौ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा आजदेखि पुन: सञ्चालन गर्दैछ । गत वैशाख १५ गतेदेखि कोरोना जोखिमका कारण लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा स्थगन गरिएका थिए । मन्त्रालयद्वारा यही भदौ १३ मा जारी सूचनामा प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवेदन दिइ बायोमेट्रिक गरेका लिखित परीक्षा र लिखित परीक्षा […]